Hay’adda Sirdoonka oo soo Bandhigtay Ninkii Shalay Isku Qarxin Rabay Suuqa Beerta Iyo Garaashkii Lagu Soo (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
Hay’adda Sirdoonka oo soo Bandhigtay Ninkii Shalay Isku Qarxin Rabay Suuqa Beerta Iyo Garaashkii Lagu Soo (SAWIRRO)
HMN:- Hay’adda Nabad sugida iyo sirdoonka Qarankan ayaa soo bandhigtay Sawirka ninkii Shalay qaraxa ka fulin rabay Suuqa beerta ee la qabtay.
Ninkan oo Lagu Magacaabo Xasan Cabdi ayaa ahaa ninkii waday gaarigii shalay ku qarxay Suuqa Beerta ee Degmada Waaberi, gaarigaasi oo la sheegay in noociisa uu ahaa Homey oo wax kuraas ah aan lahayn, waxaana gudaha gaarigaasi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Ninkii laqabtay ee waday gaarigan oo deegaan ahaan ka soo jeeda, tuulada Mubaarak ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa Saxaafadda u sheegay in hal sano ka hor uu yimid Magaalada Muqdisho, uuna ka tirsanaa Ururka Al Shabaab.
Waxaa kaloo uu sheegay in Aduunyada ay ciriiri ku noqotay uuna doonaayay inuu isaga tago, sidaasi darteedna uu u soo kaxeeyay gaariga waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen, oo uu ku halaagay dad fara badan oo Masaakiin ah.
Ninkan ayaa sheegay maalmo ka hor in la baray sida loo kaxeeyo gaariga, islamarkaana looga shakisanyahay inuu madaxa si ka yahay, ayaa waxaa qorshihiisa uu ahaa inuu aduunyada isaga tago.
Dhagar qabahan iyo rag kale ayaa hada waxaa gacanta ku haayo Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Suggida Qaranka, waxaana ninkan la la soo qabtay ragii mas’uulka ka ahaa garaashkii gaariga lagu soo diyaariyay, waxaana iminka ku socota Baaritaan lagu ogaanada xiriirkooda iyo cida hogaamiso.